Golaha Amaanka oo mudo hal sano ah u kordhiyay AMISOM
Home Somali News Somali Government Golaha Amaanka oo mudo hal sano ah u kordhiyay AMISOM
6 March 2013- Fadi ay xalay saqdii dhexe isugu yimaadaan 15 doowladood ee golaha amaanka, ayaa waxaa lagu ansixiyay in mudo sanad ah loo kordhiyo Ciidamada AMISOM, ee nabad ilaalinta ka wada gudaha dalka Soomaaliya.
Kadib ansixinta mudada sanadka ah, ayay golaha amaanka xoghaya guud Baan Kii Moon, waxay ka dalbadeen in lasii wado taageerada dhanka Loojiistikada ah ee lasiiyo Ciidamada AMISOM, kuwaasoo howlgalkooda uu ku egyahay 28 February 2014.
Ciidamada AMISOM, ayaa Soomaaliya soo caga dhigtay 2007, waxaana hada u buuxsantay mudo 6 sano ah, waxayna qayb weyn ka qaateen nabad kusoo dabaalida Caasimada Muqdisho iyo qaybo badan oo Koofurta kamid ah, sidoo kale waxay qayb weyn ka qaateen dib udhiska ciidanka doowlada iyo tababaro ay u fidiyeen.
Mudo kordhinta ay golaha amaanka u kordhiyeen Ciidamada AMISOM, ayaa kusoo aadeysa waxyar saacado kadib markii sidoo kale golaha amaanka ay Soomaaliya ka rafciyeen xayiraada hubka ee mudada dheer saarneyd, iyadoo go’aanadaana ay qayb ka qaadan doonan dib u dhiska Ciidanka XDS, iyo ineey la dagaalamaan Al-shabaab, sidoo kale waxay awood u yeelan doonaan ineey la wareegaan amaanka wadanka, oo hada intiisa badan gacanta ay ku hayaan Ciidamada AMISOM.
Doowlada Soomaaliya, ayaa waxaa loo ogolaaday ineey soo iibsan karto hubka fud fudud oo kaliya, iyo ineey dib udhis ku sameeyso Ciidamadeeda, waxaana ka reeban ineey soo iibsato hubka cul culus, sida taangiyada, diyaaradaha dagaalka, gantaalada ridada dheer iyo kuwa lidka diyaaradaha ee dhulka laga gano.
Qaraarkan kasoo baxay golaha amaanka, ee mudada loogu kordhiyay Ciidamada AMISOM, iyo qaadista xayiraada hubka ayaa waxaa si weyn usoo dhaweeyay xafiiska QM uqaabilsan arimaha Soomaaliya ee (UNPOS).
Sidoo kale waxaa qaraarkan aad usoo dhaweeyay madaxda doowlada ugu sareeysa sida madaxweynaha oo ku timaamay guul usoo hoyatay Soomaaliya, iyo R/wasaare Saacid, laakiin waxaa dhanka kale kasoo horjeestay maamulada dalka kajira qaarkood sida Somaliland, iyo Puntland.